Truth be known: July 2007
ကြားတာ၊ မြင်တာ၊ ပြောချင်တာ
“စစ်တပ်ဆိုတာ စစ်တိုက်ရင်တိုက်၊ မတိုက်ရင် စစ်ပြင်ဆင်နေတာပဲ။ အခုဆို သူတို့က ဘယ်နေရာမှာ ဆန္ဒပြပွဲ ဖြစ်ဖြစ် အဆင်သင့်ပဲ။ ဒီဘက်က သူတို့လို ready မဖြစ်ဘူး။”
“စစ်တပ်မှာ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရယ်၊ ရန်သူရယ်ပဲရှိတယ်။ သူတို့ဘက်က မဟုတ်ရင် ရန်သူပဲ။”
“တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးရေးလို့ ကျနော်တို့ကသာ အော်အော်နေတယ်။ ဒီကောင်တွေက ကျနော်တို့ကို ဘယ်လို ဆော်ရမလဲပဲ ချောင်းနေတာ။ ဆွေးနွေးဖို့ လုံးလုံးကို စိတ်မ၀င်စားဘူး”
အကုန်လုံးကို ကျနော် လက်ခံတယ်။ ၆၂ ကနေ ဒီနေ့အထိ စစ်တပ်ဟာ လူထုအပေါ် အကြမ်းဖက် နှိမ်နင်းလာတာကြီးပဲ။ ဘယ်ဆန္ဒပြပွဲမှာမှ ၀ိုင်းထားတဲ့ ရဲ၊ စစ်တပ် က ပြည်သူလူထုကို အေးအေးချမ်းချမ်း အိမ်ပြန်ခွင့် မပေးခဲ့ဖူးဘူး။ ဘယ် ရဲ၊ စစ်တပ်ကမှ ပစ်မိန့်ကို ဖီဆန်ပြီး မပစ်ပဲ မနေခဲ့ဖူးဘူး (ဓနုဖြူမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို မပစ်ခဲ့တာကလွဲလို့)။ ဘယ်လောက်ပဲ လူကြားကောင်းအောင် ပြောပြော၊ ဆွေးနွေးပွဲဆိုတာတွေဟာ မင်း ငါတို့ ပြောတဲ့အတိုင်း လုပ်ပါ လို့ ခေါ်ပြောတာထက် မပိုခဲ့ဘူး။
ကျနော်တို့ အတိုက်အခံတွေဟာ ယုံကြည်လွယ်တယ်။ စစ်တပ်ကို မကောင်းပြောရင် လူမမြင်ရလည်း ပစ်ယုံလိုက်တာပဲ။ စစ်တပ်မှာ “မီဒီယာကို မီဒီယာနဲ့ တန်ပြန်ထိုးစစ်ဆင်ရမယ်” ဆိုတဲ့အမိန့်နဲ့ မူရှိပြီးသားဆိုတာ ကျနော်တို့ အားလုံးသတိထားသင့်တယ်။ လောလောလတ်လတ် လက်ဖက်ရည်ဆိုင်က နမူနာပေါ့။ ကျနော် ခြောက်တာမဟုတ်ပါ။ ဒါပေမယ့် လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာ သိပ်ကို စကားကျွံခဲ့ကြတဲ့ ကျနော်တို့ ဘက်တော်သားတွေ သတိလေးတော့ နည်းနည်းပိုထားသင့်တယ်။ ဖုံး နံပါတ်တွေ၊ email တွေပါ ပေးမိရင် ပိုသတိထားပေါ့။ ဘာလို့ ဒီလက်ဖက်ရည်ဆိုင်ဟာ ဒီလောက်လွတ်လပ်ရလဲ၊ ဘာလို့ သူတို့ကို မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးက မပိတ်လည်း ဆိုတာတွေ ကျနော်တို့ စဉ်းစားမိခဲ့ဖို့ ကောင်းတယ်။ အခုဆို သူတို့တတွေ ဘယ်နိုင်ငံမှာ ဘယ်လောက်များများသော တက်ကြွသူတွေရှိတယ်ဆိုတာ မှန်းလို့ရသွားပြီ။ ဒီလူတွေကိုလည်း နာမည်ဝှက်ပေါင်းစုံနဲ့ ဆဲခဲ့ပြီးပြီ။ ဗမာပြည်မှာလည်း ဘယ်သူတွေ ဘယ်လောက်များများ လုပ်ရဲလဲ သိပြီ။ ဘာတွေလုပ်ချင်လဲ ဆိုတာလည်း သိပြီ။ တကယ်တော့ လက်ဖက်ရည်ဆိုင် ၀ိုင်းတော်သားတွေဟာ “မီဒီယာကို မီဒီယာနဲ့ တန်ပြန်ထိုးစစ်ဆင်ရမယ်” ဆိုတဲ့မူရဲ့ ပထမဆုံး သားကောင်တွေဖြစ်သွားကြတာပဲ။
ဒီပို့စ်ကို ညွှန်းပါတယ်။ http://kadaung.blogspot.com/2007/07/blog-post_20.html
ဘယ်သူ့ကိုမှ မျက်စိမှိတ် မယုံပါနဲ့ ဆိုတဲ့ သင်ခန်းစာလေး ကျနော်တို့ ရသင့်တယ်။
မှတ်ချက်။ ။ ကျနော့် အမြင်များသာ ဖြစ်ပါတယ်။ လွတ်လပ်စွာ သဘော ကွဲလွဲပိုင်ခွင့် ရှိပါတယ်။
Posted by generation96 at 9:41 AM0comments
Asaleader of the ABSDF, Dr Naing Aung, put it, ‘Our parents didn’t do it, so we have to take this responsibility. If we didn’t do it, the next generation will face the same problem.’ This has been Daw Aung San Suu Kyi’s argument. People must join together and participate now, so that everybody can live in peace and security in the future. But remembering the farmer-carpenter who is worried about getting the next meal on the table for his family, it is easy to understand why people hesitate.
The fact that parents of all backgrounds usually foster conformity with the regime reflects an interesting twist on the ‘Asian Values’ argument which prioritizes collective well-being over individual rights. Because Burmese parents, like parents everywhere, try to protect themselves and their children form harm, there is no collective well-being but only continued fear and insevurity for everybody.
Extraced from "Living Silence" by Christina Fink, Chapter 5-Families.
Posted by generation96 at 10:46 AM0comments
Such bitter feelings can be seen in the poem ofayoung man who journeyed to the Thai border to join the All Burma Student’s Democratic Front (ABSDF). He wroteapoem about his brother,acaptain in the Tatmadaw, published in the ABSDF’s Dawn Oh Wai (Cry of the Peacock) magazine.
It’s About Time They See It. It’s About Time They Correct It
By Bo Si (Theh Gon)
Don’t look down on me withasneer.
Do you dare to fight back the eyes and the smiles of the people?
Expose your knees which have knelt under the BSPP and look.
They are covered with scars.
Look at my knees which didn’t kneel under the BSPP.
Are you going to remain silent, raising your forefinger and nodding,
For the good ofagroup of evil spirits who are crazy for power?
Don’t you know that the stars on your shoulders and your salary come from
The people’s blood and sweat?
Which one are you going to look at?
The stars on your shoulders or the faces of the people?
Extracted fom “Living Silence” by Christina Fink. Chapter 5-Families.
Note : BSPP = Burma Socialist Programme Party
The poem was writtenacouple of decades ago. But this poem remains true to the present days if we substitute BSPP with SPDC.
May our soldiers understand! May they try to remove the scars on their knees!
Posted by generation96 at 9:51 AM0comments
Ne Myo and his wife are admirable parents, doing all they can to take care of their children. Moreover, the grandparents don’t have to suffer unduly because they now have enough money to pay off the military men who come to the house to extort fees for porters and forced labour. But by feeding money into the system that has put them in this untenable position, they are inadvertently helping to prop it up. I say this not to criticize families trying their best to survive but to demonstrate howamilitary regime becomes self-sustaining even when most of its citizens are opposed to it.
Extracted from “Living Silence” by Christina Fink, Chapter 5-Families.
Posted by generation96 at 9:37 AM0comments
People and Govenment
The relatives of Ma Pyu,auniversity student who campaigned for the NLD in the 1990 election, expressed similar sentiments. They told Ma Pyu’s parents: ‘Ma Pyu doesn’t know anything. Why are you letting her do this political work, fighting the government? Our government is very big and your daughter is so small and has no knowledge. It’s useless.’
The attitude of Ma Pyu’s relatives is exactly what successive military regimes have tried to cultivate. The relatives took it for granted that the people in power knew everything and ordinary people did not have the capacity to change the situation, so they should stay quiet. Not only did her relatives see themselves as powerless, but they sought to disempower Ma Pyu as well.
Extracted from “Living Silence” by Christina Fink, Chapter5– Families.
စဉ်းစားကြဖို့ပါ။ ဒီလိုပဲ ကျနော်တို့ ဆက်နေသွားကြမလား။ ကိုယ်မလုပ်နိုင်တာ၊ မလုပ်ရဲတာကို ကိုယ့်သားသမီးတွေ လုပ်ရင် အားပေးမလား၊ တားဆီးမလား။ တော်လှန်ရေးတိုင်းမှာတော့ အနည်းနဲ့အများ စွန့်လွှတ်မှုတွေ လုပ်ကြရမှာပဲ။ ကျနော့်အမြင်တော့ (ကို)မင်းကိုနိုင်တို့ ၈၈ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ မိဘတွေဟာ ရဲရင့်တဲ့ စွန့်လွှတ်မှုကို လုပ်ခဲ့ကြတယ်။ သူတို့ချစ်တဲ့ သူတို့မြတ်နိုးတဲ့သားသမီးတွေကို ဗမာပြည်ကြီး ကောင်းစားဖို့အတွက် အန္တရာယ်ကြီးမှန်းသိသိနဲ့ လူထုဘက်က ရပ်တည်ခွင့် ပေးခဲ့တယ်။
ဒီလို မစွန့်လွှတ်နိုင်တဲ့ မိဘတွေ များနေသရွေ့တော့ ကျနော်တို့ လိုချင်တဲ့ ဒီမိုကရေစီရမှာ မဟုတ်ဘူး။ ကျနော်ထပ်ပြောဦးမယ်။ ၉၆ မှာ ဆန္ဒပြပွဲတွေဖြစ်တော့ လာလိုက်ကြတဲ့မိဘတွေ။ ထောင်နဲ့ချီတဲ့ ကျောင်းသားအုပ်ကြားဝင်ရှာ၊ ငိုယိုပြီး အတင်းဆွဲထုတ်။ ဒီလိုနဲ့ တတိတိနဲ့ လျော့ပါးသွားရတဲ့ အင်အားဟာ သိပ်များပါတယ်။ ဒါဟာ စစ်တပ်က ဖြစ်စေချင်တဲ့အတိုင်း တိတိကျကျပါပဲ။ လူထုအင်အားကို လူထုနဲ့ပဲ ပြန်ဖြိုလိုက်တာပေါ့။ သူတို့အတွက် သက်သာတယ်လေ။ လူအများကြီးကို ဖမ်းဆီး၊ ရိုက်နှက်ရတာဟာ လူနည်းနည်းကို ဖမ်းရတာလောက် ဘယ်လွယ်မလဲ။
Posted by generation96 at 8:57 AM0comments
She then brought up Vaclav Havel’s essay, “The Power of the Powerless”. Written about Czechoslovakia under Soviet rule, Havel’s words had relevance for the struggle in Burma as well. She said, ‘We need to understand that people who are not in power have their own power. Don’t think you don’t have any power just because you are not part of the power structure.’ She talked about how the regime made great efforts to demonstrate they had the support of the people, for instance by staging pro-government rallies which people were forced to attend. The regime, she said, was using the power of the people to prop up their own power structure. If people didn’t have power, the regime would not bother with them. She declared, “That is why we rely on the people. Because you have power. For that reason, we are openly requesting people-power from the people.’
Copied direct from “Living Silence” by Christina Fink, Chapter 4, Military Rule Continues.
Note: She = Daw Aung San Suu Kyi.
Posted by generation96 at 9:59 AM0comments
July 19-Martyr's Day
ကျနုပ်တို့၏ အာဇာနည် ပုဂ္ဂိုလ်ထူးကြီးများကို ကျနုပ်တို့ များစွာလေးစား မြတ်နိုး တန်ဖိုးထားခဲ့ကြပါသည်။
ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများက အသွေးအသက်ကိုရင်း၍ ကျနုပ်တို့ကို ငြိမ်းချမ်းရေးတံခါး ရှေ့တော်မှောက်သို့ အရောက်တွန်းပို့ခဲ့ကြပါသည်။
ကျနုပ်တို့မှာ ထိုတံခါးရှေ့ဝယ် ၀မ်းနည်းခြင်း လွမ်းဆွတ်သတိရခြင်းတို့က တဖက်၊ ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်ခြင်းတို့ကတဖက်၊ ယောင်လယ်လယ်ဖြင့် တွေဝေငေးမောခဲ့ကြသည်မှာ ၂၀ရာစုပင် လွန်မြောက်ခဲ့လေပြီ။
ယနေ့ထက်တိုင် တံခါးကို ဆွဲဖွင့်၍ ငြိမ်းချမ်းရေးကို မဆောင်ယူနိုင်သေးပါ။
ဤသို့ဖြင့် ရှေ့ဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများ၏ အသက်သွေးချွေး အရင်းအနှီးတို့ကို အချည်းနှီး ဖြစ်စေတော့မည်လား? စဉ်းစားကြဖို့ရန် အကြောင်းကို ကျနုပ်တို့ ခံစားမိသမျှ ဝေမျှလိုက်ရပါသည်။
မောင်ညို၊ နွယ်မိုးအောင်၊ မောင်ကိုဝင်း
(သက္ကရာဇ်မမှတ်မိတဲ့ နှစ်တနှစ်က ရန်ကုန်စက်မှုတက္ကသိုလ် ကျောင်းသားတွေဆီပြန့်နှံ့ခဲ့တဲ့ ၁၉ဇူလိုင် အမှတ်တရ ကဗျာစာစောင်လေးရဲ့ မျက်နှာဖုံးနဲ့ အမှာစာပါ)
အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးများကို ဒီစာလေးနဲ့ ဂုဏ်ပြု ဦးညွှတ်ပါတယ်။
We, the people of Burma would never forget our heroes and their sacrifices no matter how hard the military regime tries to remove them from our memories.
In memory of 60th anniversary of Martyr’s Day on July 19, 2007.
Posted by generation96 at 9:01 AM0comments
Those kind of people were governing
‘One energy minister said, “To spare the wood, use charcoal.” But you see charcoal is made from wood. Those kind of people were governing.’ (U Po Khin)
Extracted from “Living Silence” by Christina Fink, Chapter 2, The Ne Win Years, 1962-88.
ဒါလေးဖတ်မိတော့ ကျနော်တို့ စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေရဲ့ ဗဟုသုတကြီးပုံပါ ပြန်တွေးမိတယ်။
ရန်ကုန်တိုင်း တိုင်းမှူးဗိုလ်ချုပ်မျိုးညွန့် မြန်မာ့ရုပ်မြင်သံကြားကနေ မိန့်ခွန်းပြောပုံလေး…
“ကျွန်းကိုင်းမှီ၊ ကိုင်းကျွန်းမှီဆိုသလိုမျိုး ကျွန်းပင်ကြီးက ကိုင်းပင်ကြီးကို မှီလို့။ ကိုင်းပင်ကြီးက ကျွန်းပင်ကြီးကို မှီလို့”
ဘယ်အကြောင်းပြောရင်းနဲ့လဲဆိုတာတော့ မမှတ်မိတော့ပါဘူး။ တီဗွီရှေ့ထိုင်နေတဲ့ ကျနော့်မှာ ရယ်လိုက်ရတာ။ အမြင်ကတ်လို့လား၊ ကြောက်လို့လားတော့ မသိ။ နောက်နေ့ သတင်းစာထဲလည်း ဒီတိုင်းပဲထည့်တာပဲ။
တနေ့တော့ ထုံးစံအတိုင်း ဗိုလ်ချုပ်တယောက်(ဘယ်သူလဲ မမှတ်မိပါ)် လှည့်လည်ကြည့်ရှုရင်း သင်္ဘောတစင်း ထွက်ချိန်တန်တာမထွက်ပဲနေတာတွေ့သတဲ့။
မထွက်ဖြစ်တာ “weather မကောင်းလို့ပါ”လို့ လိုက်လံရှင်းပြသူက ဖြေသတဲ့။
ဒီမှာ ဗိုလ်ချုပ်က မကျေမနပ်နဲ့ “၀ယ်သာ မကောင်းရင် ပြင်လိုက်ပေါ့ကွ”လို့ ပြောသွားပါသတဲ့။ တကယ်ကြုံခဲ့ရတဲ့သူက ပြန်ပြောတာလို့ဆိုပါတယ်။
“me too” ကို “me three” လို့ပြောတယ်ဆိုတာတော့ သက်သေ မရှိပါ။
ဗိုလ်သန်းရွှေတက်ခါစက စက်ရုံတရုံကို စစ်ဆေးပါတယ်။ အဲဒီစက်ရုံက ဘယ်စက်ကြီးကြီးမှ အလုပ်မလုပ်ပါဘူး။ ပိစိကွေးလေးတွေပဲ နည်းနည်းပါးပါး အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ တိုင်းပြည်ခေါင်းဆောင်ကြီး လာစစ်မှာကို စက်ပိစိလေးတွေပဲပြလို့မဖြစ်ဘူးဆိုပြီး စက်ရုံမှူးကြီးက နှစ်ပေါင်းများစွာ မလယ်ပဲ ရပ်ထားတဲ့ စက်အကြီးဆုံးတလုံးကို အားချင်း ဆေးတွေသုတ် ဆီတွေထည့်လုပ်ခိုင်းပါတယ်။ ကျနော်တို့ခေါင်းဆောင်ကြီးလဲလာရော စက်ကြီးကို ပြ၊ ဒါကြီးက တနေ့ကို ဘယ်လောက်ထွက်ကြောင်း၊ ဘယ်လောက်ကောင်းကြောင်း ရုပ်တည်နဲ့ ရှင်းလွှတ်လိုက်တာ ကိုသန်းရွှေတယောက် ခေါင်းတညွတ်ညွတ်နဲ့ လိုအပ်သည်များ မှာစားပြီး ပြန်သွားဖူးကြောင်း။ စက်ရုံမှူးကိုယ်တိုင် နှစ်ပေါင်းများစွာကြာမှ ကျနော်တို့ကို ပြန်ပြောပြတာပါ။
အဲဒီတော့ ကျနော်တို့ဗမာပြည်လည်း…Those kind of people were governing ပေါ့။
Posted by generation96 at 9:33 AM2comments
ဇူလိုင် ၇၊ ၈၈၊ စစ်တပ် နဲ့ ဘာလုပ်မလဲဆိုတာ
ဇူလိုင် ၇ အရေးအခင်းဟာ ၁၉၆၂ စစ်တပ် အာဏာသိမ်းပြီး ၄ လ မှာတင်ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ ဒီအရေးအခင်းကို ကိုယ်တွယ်ပုံကို ကြည့်ရင် စစ်တပ်ဟာ ဘယ်လောက်ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်တယ်ဆိုတာ သိသာပါတယ်။ အဲဒီအချိန်က ဗမာပြည်မှာ ဒီမိုကရေစီ ငွေ့ငွေ့လေး ကျန်သေးတော့ ဒီသတင်းဟာ သတင်းစာတွေထဲလည်း ပါပါတယ်။ ကျောင်းသားတွေကလည်း စာစောင်တွေထုတ်ပါတယ်။ ၁၉၆၃ ထဲအထိ ဆန္ဒပြပွဲတွေလုပ်၊ အထိမ်းအမှတ် အုတ်ဂူတွေလုပ်နဲ့ တတိုင်းတပြည်လုံး ပူဆွေးသောက ရောက်ခဲ့ကြရတာပါ။
ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့ ဗမာတွေ တော်တော်များများဟာ သင်ခန်းစာ မယူကြဘူး။ ဒါမှမဟုတ် တော်တော်များများဟာ တကိုယ်ကောင်းဆန်ကြတယ်။ ကိုယ့်တဦးချင်း၊ ကိုယ့်မိသားစုရဲ့ ကိုယ်ကျိုးစီးပွားပဲ ကြည့်ကြတယ်။ စစ်တပ်ဟာ သူ့ရဲ့ ဗီဇကို အဲဒီလောက်စောစော ပြတာတောင်မှ ဒီလောက်ဆိုးဝါး စစ်တပ်ထဲ မ၀င်ဘူး၊ ကိုယ့်ပြည်သူအချင်းချင်း မနှိပ်စက်နိုင်ဘူး ဆိုတဲ့ စိတ်ဓာတ်တွေမရှိဘူး။ အာဏာလေးပြချင်တာနဲ့ တပ်ထဲဝင်ကြတယ်။ အဖေတွေ အမေတွေကလည်း ကလေးတွေကို မတားဘူး။ အသက်ဆုံးရှူံးသွားကြရတဲ့ ကျောင်းသားတွေကို သားသမီးချင်း မစာနာဘူး။ တကယ်လို့ ကိုယ့်ကလေးက နားမလည်ရင်တောင်မှ ရှင်းပြ၊ ပြောပြပြီး တားသင့်တယ်။
ဒီလိုနဲ့ ဗမာပြည်ရဲ့ စစ်တပ်ကြီးဟာ သူလုပ်ခဲ့တဲ့ အပြစ်အတွက် ဘာမှမဖြစ်ပဲ ပိုလို့တောင်ကြီးကြီးလာတယ်။
တကယ်လို့များ ကျနော်တို့ ပြည်သူတွေဟာ ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ စစ်တပ်ကို တပ်ထဲမ၀င်ခြင်းအားဖြင့်၊ တပ်ထဲမ၀င်အောင် ရှင်းလင်းပြောပြချင်းအားဖြင့် ကိုယ်တတ်နိုင်သလောက် ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန့်ကျင်ခဲ့ရင် ခုကျနော်တို့ရဲ့ အနာဂတ်ဟာ အခုလောက်ဆိုးမယ်မထင်ဘူး။
၈၈ အရေးအခင်းပြီးတော့လည်း ဗမာလူထုဟာ ဒီအတိုင်းပဲ။ အခွင့်အရေးသမားတွေ၊ တကိုယ်ကောင်းသမားတွေ၊ အာဏာရူးတွေ သိတ်ကိုများတယ်။ ပါးစပ်က ဘုရားဘုရား၊ လက်က ကားယားကားယားဆိုတာ ဗမာတွေအတွက် အရမ်းမှန်တယ်။ စစ်တပ်ဟာ အပေါ်စီးရသွားပြီ။ အာဏာ ပြန်ပေးမှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာလည်း သေချာရော တပ်ထဲ ၀င်လိုက်ကြတဲ့လူတွေ။ မရှက်ကြဘူးလား။ ကျနော်ဆို အမျိုးထဲမှာ တပ်ထဲကလူ ပါနေရင်တောင် လူသိမခံရဲဘူး။ ရှက်လို့။ ထားတော့။
အဲဒီတော့ ကျနော်တို့ နောက်မျိုးဆက်ကို ဘယ်လို ဗမာပြည်ပေးချင်တာလဲ။ ကျနော်တို့ဟာ သူတို့ရဲ့ အပြစ်ပြောတာကိုခံကြမှာလား။ ကိုယ်လုပ်နိုင်သလောက်လုပ်ရင်းနဲ့ မလျှော့သောဇွဲနဲ့ ကြိုးစားမှာလား။ ဆုံးဖြတ်ပါ။ ပြီးရင် စ လုပ်ပါ။ တပ်ထဲ မ၀င်ပါနဲ့။ ၀င်မယ့်လူကို တားပါ။ ပြီးတော့ အရေးအကြီးဆုံးက ရှက်တတ်ကြပါ (ဘယ်သူမှ မသိပေမယ့် ကိုယ့်ကိုယ်ကို သိပါတယ်)။
Posted by generation96 at 10:03 AM0comments
The real struggle in Burma is the struggle between the desire to opt for the easy option of submitting to the demands of the powers that be and the commitment that leads to the hard road of resisting the threats and blandishments ofaruthless regime.
Daw Aung San Suu Kyi on “Living Silence” by Christina Fink
လွယ်ကူတဲ့လမ်းဖြစ်တဲ့ အာဏာရှင်တို့ လိုလားတဲ့အတိုင်း နေတာရယ်၊
ခက်ခဲတဲ့ လမ်းဖြစ်တဲ့ အကြင်နာကင်းမဲ့တဲ့ စစ်အစိုးရရဲ့ ခြိမ်းခြောက်မှုတွေ၊ လိမ်လည်လှည့်ဖြားမှုတွေကို ဆန့်ကျင်ဖို့ဆိုတာရယ်၊
ဘယ်လမ်းကို ရွေးရမလဲလို့ အခက်တွေ့နေကြတာပါပဲ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ “Living Silence” စာအုပ်အပေါ် သုံးသပ်ချက်မှ ကောက်နှုတ်တင်ပြသည်။
Posted by generation96 at 10:26 AM0comments
Rare7July records
7july ရဲ့ သမိုင်းဝင် ပုံရိပ်တွေကို ဘားမားတူဒေး မှာ ကြည့်လို့ရပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း။
ပုံက အဲဒီထဲက ယူထားတာပါ။ ဒီအရေးတော်ပုံ ကျောက်တိုင် ကျနော်မတွေ့ဘူးပါဘူး။ ဗိုလ်အောင်ကျော် ကျောက်တိုင်ပဲ ရှိတော့ပါတယ်။ ဘယ်အချိန်မှာ အဖျက်ခံလိုက်ရလဲတော့ မသိပါ။ သိရင် ပြောပြကြပါ။
Posted by generation96 at 8:47 AM0comments
In memory of7July
On7July 1962, the Burmese military, which claimed to have saved the country in almost bloodless coup barely four months ago, opened fire the unarmed Rangoon University Students who were staging protests against the military rule. Many were killed. Wounded students were evacuated in the Students Union Building along with hundreds others. The next morning (8th July, 6am), the military Blew up the Union building killing all inside.
It has been 45 years since that incident. But the blood of our brothers and sisters are still dropping.
May we bring justice… for them, for us, for Burma.
We fly the peacock flag half pole.
၇ ဇူလိုင် ကဗျာများကို အန်တီမေငြိမ်းဆီမှာ ဖတ်ကြပါ။ ပုံတွေကိုလည်း အန်တီမေငြိမ်းဆီမှာ link တွေ့လို့ သစ္စာ က ယူထားပါတယ်။ အဲဒီမှာလည်း ဆောင်းပါးတွေဖတ်နိုင်ပါတယ်လို့။
Posted by generation96 at 1:06 AM0comments